ukungasebenzi Erectile - inkinga esithinta khona namadoda amaningi. Izinkinga ukuphila ubulili singenzeka kokubili khona izinhlungu zokugula okungathí sina, futhi ngenxa ukucindezeleka okunzima noma ukuhlukumezeka. Kunoma yikuphi, abantu bobulili esinamandla kakhulu sensitive le nkinga.
Ngenhlanhla, izinkinga nokuntula ukwakhiwa zingaxazululwa. Kaningi, iziguli ezinqunyiwe isidakamizwa "sildenafil citrate", futhi aziwa kabanzi "Viagra". Futhi abantu abaningi banesithakazelo imibuzo ngalokho ithuluzi nokuthi kuyithinta kanjani umzimba. Kungakanani Isidakamizwa? Ingaba khona nanoma yiziphi izinkinga ngemuva yokwemukela yakhe?
Ukwakheka kanye nefomu wokukhulula izidakamizwa
Ukulungiselela "sildenafil" ikhiqizwa ngendlela amaphilisi esincane okusaqanda umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngezinye iphutha amhlophe futhi off-mhlophe. Ekhemisi angathengwa amabhamuza amaphilisi 1, 2, 4, 10 noma 20.
The main isithako esebenzayo citrate sildenafil - 100 mg, 50 mg noma 25 mg kuthebulethi ngamunye. Ngokwemvelo, ukwakheka iqukethe nezinye izinto elisizayo, ikakhulukazi i-lactose monohydrate, magnesium stearate, sodium croscarmellose, microcrystalline cellulose futhi povidone. I enamathela ifilimu sakhiwe polyvinyl utshwala, macrogol, talc, ama-titanium dioxide, futhi odayi esekelwe yensimbi kanye ne-aluminium.
The main izakhiwo kwemithi
Sildenafil citrate akuyona ngaphandle abakhethayo inhibitor tsikloguanozinmonofosfata uhlobo oluthile phosphodiesterase yesihlanu, okuyinto unomthwalo ukubhidlika cGMP.
Ukuze uzwisise lo mshini wezenzo, kubalulekile kuqala ukucabangela inqubo ukwakhiwa. Lihlobene nokubhekana ubuso ukukhululwa emzimbeni cavernous of oxide nitric, okuholela amazinga anda cGMP ephumula imisipha abushelelezi umzimba cavernous futhi ukwandisa ukugeleza kwegazi - kuba ukwakhiwa wenduku.
Sildenafil akunamthelela le cavernosum Corpus ngqo. Kodwa, ngo-ezivimbela phosphodiesterase cGMP ezingeni waphawula ngcono ukuthi sithuthukisa umphumela sasikhipha nitrogen oxide futhi efanele, ihlinzeka omkhulu ugcwalisa cavernous igazi emzimbeni ivolumu.
Ngemva kokuphathwa temlomo, ketshezi asebenzayo amuncwa umzimba ngokuphazima kweso. Ngokwesilinganiso, bioavailability salo 40-60%. Ngokuvamile, umphumela izidakamizwa ibonakala ngemuva kwemizuzu engu-60 ngemva kokungenisa, nakuba lesi sibalo zingahluka kusuka imizuzu engu-30 kuya kwangu-90. Umzimba we ketshezi esebenzayo esibindini. Lokukhipha exchange amathumbu nezinso imikhiqizo. Yingakho amaphilisi iziguli iziyaluyalu e nezinso isibindi, kungenzeka kuphela ngemuva ukuxilongwa okujuli- ngudokotela.
Yiziphi izinkomba ukusetshenziswa?
Mhlawumbe inkomba kuphela ukusetshenziswa kwezidakamizwa "sildenafil citrate" kuyinto Erectile Dysfunction - okungukuthi, ukungakwazi futhi ligcine uhlelo ukwakhiwa. Kuyaphawuleka ukuthi izidakamizwa iphumelela kuphela ezanele ukushukuma ngokobulili. Futhi "Sildenafil citrate" amaphilisi azihloselwe kwabesifazane. Ngemva kwakho konke lokhu ukulungiselela - hhayi i-ejenti causative, indlela yayo yesenzo sihlotshaniswa ukwanda ukugeleza kwegazi esinikeza ukwakhiwa, kodwa hhayi nge kukhulise isifiso sobulili.
Umuthi "Sildenafil Citrate": Ukufundiswa nokuPhatha
Ngokushesha kuyafaneleka ukuthi ngaphambi kokuthatha amaphilisi kudingeka kudokotela. Kuphela onguchwepheshe Ungakhetha ngokunembile umthamo ephumelela kunazo. Ngokuvamile, amadoda eyabelwe uqale ukuthola 50 mg isithako esisebenzayo. In the ukungabikho lemali edingekile of ukusabela senyuselwa mg 100. Uma, Ngakolunye uhlangothi, umthamo kokuqala okubangelwa nemiphumela engemihle, ke liye ku-25 mg. kungenziwa ngesikhathi kuthathwe mg akukho ngaphezu kuka-100 lomcebo asebenzayo. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa iphilisi ezingaphezu kwesisodwa ngosuku. Isilinganiso esithathwa abantu abaphethwe isifo sezinso futhi isibindi 25 mg.
Ngokushesha kuba ukusho ukuthi lokhu imithi has Izimo, kusukela lapho uhlu uqinisekise ukuthi ufunda:
hypersensitivity kunoma yiziphi izinto abamelwe (eduze bajwayelane Ukwakheka ngaphambi zisebenzisa);
ngokuthi "sildenafil citrate" sithuthukisa nitrate isinyathelo, ngeke asetshenziswe kanye nezinye nitric oxide donators, noma yiluphi uhlobo nitrate kanye nitrites;
thuthuva lokugayeka kokudla i-lactose, ngokukhethekile, ukungabekezelelani yayo futhi lactase ukuntuleka kwamavithamini, ukungezwani zikashukela-galactose malabsorption;
isidakamizwa ayenzelwanga iziguli ezingaphansi kweminyaka engu-18 ubudala, kanye abesifazane.
Kukhona okuthiwa Izimo isihlobo ngokumelene okuyinto reception kungenzeka, kodwa kuphela ngokuqapha kakhulu. Leli qembu ingase ihlanganise ukusonteka ahlukahlukene yokwakheka umthondo, wegazi, thrombocythaemia, isikela cell anemia lezinceku retinitis pigmentary, izifo ephelezelwa ukopha, kuhlanganise izinkathi acute isilonda esiswini kanye namathumbu.
Yingozi kukhona izifo ezifana nomfutho wegazi ophezulu kanye hypotension, angina engazinzile, ukwehluleka senhliziyo, unhlangothi, infarction yamuva esivimba amanzi.
Yiziphi imiphumela engemihle?
Naphezu kweqiniso lokuthi izidakamizwa ayivamile ukubangela nemiphumela emibi kangakanani, aziyi kungenzeka. Lezi zihlanganisa:
ubuhlungu esiswini nasesifubeni, Ukugodola, ubuso edema, ukukhathala, ukuzwela anda ukuze ukukhanya;
iziyaluyalu isimiso sezinzwa, kuhlanganise ukuqwasha noma hypersomnia, paresthesias, neuralgia, amaphupho engavamile, Ukudlikizela, unhlangothi, ataxia, kwehle ingqondo;
izinkinga esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, kuhlanganise ukwanda kokutheleleka kudlange noma ukuwa wegazi, isilethikusebenza, tachycardia, nakwisyncope, arrhythmias, cerebral thrombosis semithambo, ukuhluleka kwenhliziyo futhi zenhliziyo;
iphika, ukukhwehlela, epistaxis, sinusitis, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, eqinisa ukukhwehlela ekhona, isifuba somoya kanye namanye iziyaluyalu umgudu wokuphefumula;
iziyaluyalu ipheshana wokugaya ukudla, okungukuthi isicanucanu, ukuhlanza, glossitis, nesifo, stomatitis, gingivitis, ukopha rectal, kome le mucosa ngomlomo, dysphagia;
Kusukela izinzwa kungenzeka ubuhlungu emehlweni, angaboni kahle, cataract, ukulimala conjunctival, ubuhlungu futhi tinnitus, inzululwane, izithulu.
Phakathi kwezinye imiphumela emibi zihlanganisa synovitis atrity, myalgia, ithambo ubuhlungu, edema neuropathy, ukoma normal, ukuthuthukiswa sifo kanye nesifo sikashukela engazinzile, kanye dermal izilonda, anorgasmia, ukujuluka yanda, incontinence, nisekeliwe ukwakhiwa isikhathi eside kakhulu.
Ulwazi olunembile mayelana kokudla izidakamizwa cha. Noma kunjalo, ukusetshenziswa njalo ebulilini kakhulu "Sildenafil citrate" isidakamizwa kwandisa ingozi nemiphumela engathandeki yalawo maphilisi - okungukuthi, isiyezi, palpitations, ukuphazamiseka of imibala nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo. Yingakho kudingeka ngokuqinile umthamo watusa ngudokotela wakho, futhi uma kukhona ukuwohloka ngokushesha ubone onguchwepheshe.
Umuthi "Sildenafil Citrate": Intengo
Yiqiniso, i-iziguli eziningi kubaluleke kakhulu kuba umbuzo izindleko umuthi. Ngakho malini kuzobiza lesi sidakamizwa "citrate sildenafil"? Inani kulokhu sehluka kakhulu. Konke lapha incike umakhi, egameni lendawo yokuhweba (zikhona izidakamizwa eziningana nge ukwakheka efanayo eyisisekelo), inqubomgomo zamanani Ikhemisi, idolobha yokuhlala nokunye. D.
70-110 ruble - kungadla kangaka kwelinye thebhulethi "Sildenafil Citrate" izidakamizwa. Ekhawunteni bese kungaba lonke iphakethe, kodwa ukubaluleka kwaso uyovele ube ephakeme - ruble 1100.
Yiqiniso, iziguli eziningi unesithakazelo ngaphambi kokuthenga ama-umbono wezazi namanye amadoda asebethole kwadingeka isikhathi ukuzama lokhu imithi. Uphenyo odokotela isikhathi esiningi omuhle, ngoba izidakamizwa is "Sildenafil" ngempela ukwenza umsebenzi walo - ngokushesha kunikeza ukwakhiwa, kungakhathaliseki ukuthi kubangelwa izinguquko bokuphila noma ngokwengqondo.
Yiqiniso, iziguli ngokwabo ukukhangisa nobuchwepheshe babo akuyona ezisheshayo kakhulu, ngakho njengoba Erectile Dysfunction - udaba olubucayi ngenxa yawo wonke umuntu. Noma kunjalo amaphilisi ukusiza ngempela ukubhekana kangcono nale nkinga futhi ukusungula ukuphila ocansini. umphumela zabo kuthathe amahora amaningana. Amanye amadoda ngisho bathi ukuzwa ngesikhathi sokuya ocansini ngokucace nakakhulu igcwaliswe. Inani lentengo lomuthi kuyinto ngempela kufinyeleleke, okuyilona elisebenzayo futhi inzuzo obalulekile. Imiphumela engemihle ziyabonakala ngezikhathi ezithile, kodwa le ngozi lihlotshaniswa yokwamukela cishe kunoma iyiphi izidakamizwa.